जनतालाई भरोसा खोई ?
अहिले हाम्रो देशको राजनैतिक अवस्था संकट ग्रस्त देखिन्छ एक पछि अर्को जटिलता थपिदै गहिरहेका छन् । पार्टीभित्र चुनौतीका ताती लागेका छन् । पार्टी भित्रको परिस्थिति अबत साम्य होला भन्यो झन बन्दा झन जटिल बन्दै गहिरहेको देखिन्छ । बिशेष गरेर नेकपा एमाले भित्रको जटिलता बाहिरबाट हेर्दा पार्टी बिभाजनतिर उन्मुख भइसकेको छ । द्वन्द्व दिनानुदिन चर्केर जाँदो छ ।
एक नेताले अर्कोलाई दोषारोपण, छेड्छाड्को अभिव्यक्ति दिने परिपाटी तिब्र छ, मतभेद बढ्दो छ । आत्म आलोचना कसैले गर्दैनन् । सुधारिन र संसदीय मर्यादामा बस्न पनि कोही तैयार छैनन् । विधि बिधान संगत प्रक्रियागत मार्गबाट पार्टिलाई अगाडि लैजानुको विकल्प अरू देखिदैन तर पनि सहमतीय वातावरण आशा लाग्दो देखिदैन । भरोसा युक्त देखिदैन । बोली र व्यबहार पटक पटक फेरिएको देखिन्छ । एकतावद्ध बनाउनुको सट्टा पार्टी बिभाजनको संघारमा देखिन्छ । एकातिर कोरोना महामारी अर्कोतिर राजनैतिक जटिलताको मार सहन जनता बाध्य छन् । किन यसो भै रहेछ ? कसको अकर्मण्यताको कारण निर्दोष जनताले सास्ती भोग्नु परेको हो ? परिस्थिति झन पेचिलो बन्दै गहिरहेको अवस्था हामी देखिरहेका छौ, भोगिरहेका छौ । पाटी भित्र अन्तर संघर्ष हुन्छ तर बिभाजनको संघारमा पुग्ने गरि हुनु यो भन्दा दुःखलाग्दो स्थिति के हुन सक्छ ? जनताको जनादेश गरिब निमुखा बिपन्न बर्गका सेवाका लागि अगाडि बढ्नु पर्ने बेलामा बैचारिक लडाइ खेप्नुपरेको छ । नेकपा एमाले पार्टी भनेको उदारता प्रतीक बन्न सकेन ।
जनताले सधै भरी चुनौती र संकटको चक्रब्युह भित्रै फसिरहनु परेको छ । यहीँ संकट ब्यहोर्न यत्रो बलिदानी त्याग तपस्या गरेको हो त ? भन्ने जनताबाट आवाजहरू आउन थालेका छन् । के अबका दिनमा साँच्चै नै राजनैतिक सामाजिक आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन सक्दैन । यस्तै हो भने हामी नेपालीको भविष्य के हुने हो, देशको परिस्थिति कता मोडिने हो ? राष्ट्र राष्ट्रियता र जनताको सार्वभौमिकतामानै कस्तो असर पर्ने हो ? गम्भीर प्रश्नहरू हुन् आजको ज्वलन्त परिस्थितिमा ।
वास्तवमै हामी नेपाली कहालीलाग्दो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेका छौ भन्न बाध्य बनाइयो । तर अबका दिनमा पस्थितिलाई साम्य बनाउदै यो राष्ट्र समस्यालाई निराकरण क्रमश गर्दै नेकपा एमाले पार्टी भित्रको मतभेद छिटो भन्दा छिटो अन्त्य हुनैपर्छ । नत्र भोलिका दिनमा नेकपा एमालेको गरिमा के होला ?
नेपालको सार्वभौमिकता लोकतान्त्रिक राज्य ब्यबस्था यिनै राष्ट्रका संबेदनशील बिषयमा उच्च– तहका नेताहरूको ध्यान जान अत्यन्त जरूरी छ । यस्तो संबेदनशील बिषयमा पनि अन्योलको वातावरणमामा कहिलेसम्म रूमलिरहनु पर्ने हो ? जनताको समृद्धि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणतिर ध्यान केन्द्रित हुनैपर्छ । हिजोको भन्दा जनताको जीवन स्तर कमजोर हुँदै खस्किदै गएको छ । महङ्गी हत्या हिंसा बलात्कार बढिरहेका छन्, यतातिर ध्यान जाओस् । जनताको भरोसा तोड्ने काम कसैबाट नहोस् । अब जनतातिर फर्किनुस् । सबै जनताको दुःखमा साथ दिनुस् । जस्ले तपाईलाई माथी पु¥याउन भ¥याङ् बनेका थिए, तिनका हालत हेरियोस् ।
त्यसैले देश र जनतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर प्रतिकुल विकट परिस्थितिलाई अनुकुल बनाउदै यो अहिलेको सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनैतिक संकट देखाएर मात्र अब हुन्न, हिजो देश र जनताको सार्वभौम अधिकार, समृद्धिको पाटो अनि ती मजदुर किसान न्यून आय आर्जन भएका बिपन्न बर्गकाका लागि सामाजिक आर्थिक स्तरलाई सुधार गर्ने भनेर गरिएको राजनैतिक परिवर्तनले सार्थकता पाउनु पर्छ । सिमान्तकृत बर्गका आर्थिक सामाजिक राजनैतिक बिकासका नयाँ ढाचामा रूपान्तरित भएन, अब हुनुपर्छ । अस्थिरता मै घुम्ने कि समाधानतिर लाग्ने, सोचौं । बिबाद थाँती राखेर जनताको जिउ धनको रक्षाका लागी सबैको ध्यान जानुपर्छ ।